Ubani Ophethe Abalandeli Bakho be-Twitter Benkampani? | Martech Zone
Ubani Ophethe Abalandeli Bakho be-Twitter Benkampani?
Lwesibili, Disemba 27, 2011 NgoMgqibelo, Disemba 17, 2016 Douglas Karr
I-akhawunti emnandi kuNew York Times yokuthi kanjani UPhonogog umangalela isisebenzi esedlule ukuthola ukufinyelela kubalandeli beTwitter nge-akhawunti ayisungule njengengxenye yokufinyelela kwabo ezinkundleni zokuxhumana.
Ngamazinga amanje okuqashwa ezweni, ngicabanga ukuthi i-PhoneDog igcwele ngaphakathi kwamalungelo abo… umsebenzi owenzayo ngesikhathi senkampani uqobo ophethe yinkampani. Kodwa-ke, imithombo yezokuxhumana inayo zashintsha kokubili ukubona nokuxhumana phakathi kwezinkampani nenethiwekhi yazo. Kudala ukuthi abantu babekwazi ukuma ngemuva komkhiqizo ukuxhumana nenethiwekhi. Sifunde ngezikhangiso, ama-brand, ama-logo, iziqubulo namanye amathuba oxhaso. Inkinga ukuthi ezokuxhumana manje sezibeka abantu ngaphambi kwe inkampani futhi ixhumana ngqo nomkhiqizo. Inkolelo yami yangukuthi, ngoba imithombo yezokuxhumana ishintsha ukuhamba kokuxhumana, amaphethini wobunikazi nawo ayashintsha.
Ukubheka emuva kuhlala kungu-20/20, kepha kulula inqubomgomo yezokuxhumana ngabe bekusungule lokhu ngaphambili. Ngenkathi uPhonedog enganqoba impi yezomthetho yokuthi ngabe bangabanikazi noma cha, kodwa iqiniso lokuthi abalibekelanga lokhu kulindeleka kunqubomgomo yezokuxhumana bekuyiphutha. Ngokubona kwami, ngikholelwa ngokweqiniso ukuthi icala labo alinankinga ngokuya kulokhu kuphela. Ngikholwa ukuthi kuhlale kungumsebenzi wenkampani ukusetha okulindelwe emisebenzini nakubunikazi.
Njengoba kungekho muntu onebhola lomlingo, udinga ukucabanga ngalokhu nabasebenzi bakho bese usetha okulindelwe okufanele:
Uma ungafuni ukuthi abasebenzi bakho benze siqu abalandeli babo, ungabaphatha futhi baxhumane nge-akhawunti exhaswe yinkampani. Isibonelo: Esikhundleni sokuthi abasebenzi bethu baphathe ama-akhawunti abo, sibanikeza ukufinyelela kuwo @nomfundo_m nge I-Hootsuite futhi isikhumbulo sesikhana. Ngibonile ukuthi abanye abantu bazoba nesibambo kube yigama lenkampani, kuyilapho igama langempela kwi-akhawunti kungabasebenzi. Ngikholwa ukuthi lokho kubeka okulindelwe kuzithameli kanye nenkampani engumnikazi we-akhawunti.
Ngiqaphele ezinye izinkampani ezazinabasebenzi bazo ababhalisela i-Twitter ngesibambo esihlanganisiwe negama. Isibonelo, uma bengifuna ukuthi isisebenzi ngasinye sibe ne-akhawunti yenkampani… ngingahle ngisethe i- @ dk_doug, @dk_jenn, @dk_stephen, njll. Ukulandela okuhle ku-akhawunti ekugcineni okushiyiwe!
Inketho yokugcina, ngombono wami, iyona ehamba phambili. Vumela abasebenzi bakho ukuthi bakhe inethiwekhi yabo futhi bayigcine. Ngiyazi ukuthi ukwethukile lokhu, kepha ukunika amandla abasebenzi bakho ukuthi baphumelele kunamandla. Ngiyalithanda iqiniso lokuthi UJenn futhi Stephen bobabili bakhuluma kaningi ngakho DK New Media kuma-akhawunti abo. Uma bakha okulandelayo okumangazayo, ngikubheka njengenzuzo yokuba nabo basebenze nathi futhi kuyinani elengeziwe abaliletha enkampanini yami. Kungumsebenzi wami futhi ukuqinisekisa ukuthi bajabule futhi ngingabagcina lapha!
Umphakathi uqala ngabantu, hhayi inkampani. Labo balandeli babengebona abalandeli be-Phonedog… bakuthokozela okuqukethwe okwenziwe ngezandla lokho UNowa Kravitz ukwazile ukuthuthuka esikhundleni sePhonedog. Ngenkathi kungenzeka ukuthi uPhonedog wakhokha uNowa, abalandeli bakaNowa abanethalente bakhangwa.
Izwi lami lokugcina kulokhu: Ngiyalizonda igama siqu futhi ubunikazi uma kukhulunywa ngezinkampani, abasebenzi kanye namakhasimende. Angikholwa ukuthi inkampani yake yaba nesisebenzi futhi ayikaze ibe nayo ikhasimende. Isisebenzi singumsebenzi… sisebenzela imali. Ikhasimende libuye libe ukuhweba… umkhiqizo ngemali. Isisebenzi noma ikhasimende lihlala linelungelo lokushiya ngaphakathi kwemingcele yokuzibandakanya kwabo ngezivumelwano. Inkampani efana nePhonogog icabanga ukuthi siqu labo balandeli banganikeza bonke ubufakazi emhlabeni ukuthi kungani babelandela uNowa hhayi i-akhawunti yePhonogog.
Tags: izikhathi ze-york ezintshanoah kravitzi-phonedoguboshweTwitterAbalandeli be-twitter
Ukuhlaziya Ukulandela Kwakho I-Twitter
Dec 29, 2011 ku-11: 19 AM
Ngiyaxolisa kodwa ukuphela “kwabanikazi” lapha abalandeli.
Dec 29, 2011 ngo-12: 28 PM
Ngivumelana ngokuphelele nawe, Jeff!